Raim-pianakaviana iray no namoy ny ainy noho ny fianjeran’ny “rouleau” nentina kamiao lehibe iray tetsy amin’ny lalan’ny By-pass afakomaly. Mbola nahatsiaro tena ilay mpamily fiara karetsaka ka nentina namony hopitaly. Tsy tana anefa ny ainy ka izao niafara tamin’ny fahafatesany izao. Marihina fa avy naka entana tany Toamasina ity fiara lehibe iray izao nitera-doza izao.
Mpanendaka tao Antaniavo
Naiditra am-ponja omaly tamin’ny 11 ora atoandro ny mpanendaka hikoizana iray ao Antaniavo. Tratra teo am-panatontosana ny asa ratsiny ity olon-dratsy ity ka tsy afa-nitsoaka. Taorian’ny fanadihadihan’ny polisy ny tenany, niakatra fampanoavana omaly ny raharaha ka nidoboka am-ponja ity jiolahy ity.
Jiolahy nitam-basy rao koa no voasambotry ny polisy tao Maroantsetra afakomaly. Nanafika ny tokan-trano iray tao amin’ny fokontany Androkaroka ireto olon-dratsy ireto ka nanao ny fikarohana azy ny mpitandro filaminana rehefa naharay fitarainana. Voasambotra tamin’izany izy roalahy ary nahatratrana basy vita gasy niisa roa tany amin’izy ireo. Andalam-pikarohana ny namany kosa ny polisy amin’izao fotoana.